acrylic Edge Band - တရုတ် acrylic Edge Band ပေးသွင်း, စက်ရုံ -HengSu Edging
Home » ထုတ်ကုန်များ » edge band » acrylic Edge Band
acrylic Edge Band
ကျနော်တို့ acrylic စီးရီးထုတ်လုပ်ရန် High-end acrylic ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ, ဒီစီးရီးပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ချောမွေ့ texture ရှိပါတယ်, များစွာသောအရောင် combinations.This စီးရီးခိုင်ခံ့သော stereoscopic စှဲကြောင့်မြင့်မားတဲ့အဆုံးဗီရိုရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါစေတောက်ပနှင့်ဖက်ရှင် color.And ထားပါတယ်ရှိပါသည်။
ထုပ်ပိုး & သင်္ဘော
acrylic အစွန်း banding ကိုဖန်ဆင်းနှင့်တိကျသော acrylic ဗဓေလသစ်၏လုပ်ငန်းများ၌သည်၎င်း၏ features တွေမြင့်မားသောင့်လင်းမြင်သာ, ရာသီဥတုခုခံ, သက်ရောက်မှုခုခံနှင့်ပွန်းပဲ့ခုခံကြသည်။ ဤသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကြော့အသွင်အပြင်အား3ရှုထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အများအား 3D ပုံစံနှင့်အတူ classy panel ကပရိဘောဂများအတွက်အသုံးပြုသည် အစွန်း banding
acrylic (PMMA polymethyl methacrylate =) 3D edgebands များတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ, ပရိဘောဂ edgebands အသစ်နည်းပညာနှင့်ဗေဒစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်သောရေတွင်းတစ်တွင်း-ထူထောင် High-grade ကို thermoplastic ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Acrylic1exceeds ၏င့်လင်းမြင်သာဖန်၏။
လိပ်နှုန်း 200m, carton.also နှုန်း 10 လိပ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်ထုပ်ပိုးနိုင်ပါတယ်
အရောင်ကိုက်ညီခြင်း၏ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူ, အခုတော့ Hengsu လျင်မြန်စွာ customers`re ရှာပုံတော်အညီအရောင်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး, ဘုတ်အဖွဲ့ထားတဲ့ဖောက်သည်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်ပါစေ။
1 မေး: သင်၏နမူနာရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
2 Q: သင့်ရဲ့ quotation အရနည်း
A: + 86-769-22408970 မှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ် wpc@woodhengsu.com မှမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်
3 မေး: အစွန်း banding အဘို့သင့် width ကိုအကွာအဝေးများနှင့်အထူအကွာအဝေးကဘာလဲ?
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏အထူအကွာအဝေး width ကိုအကွာအဝေး 0.4mm-3mm ဖြစ်ပါသည်, 12mm-650mm ဖြစ်ပါသည်
4 မေး: သင် OEM ကိုလက်ခံနိုင်ပါသလား?
A: ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ OEM ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။
T ကကိုယ်ရေးဖိုင် Edge Band
အစိုင်အခဲအရောင် Edge Band
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ Edge Band
ကို ABS Edge Band
3D Edge Band
T က Profiles
Tel: + 86-0769-22408970
လွှတ်တော်အမတ်: 0086-13532696601; 0086-13532696082
E-mail ကို: wpc@woodhengsu.com
ဖက်စ်: + 86-0769-22405847
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ updates များကိုရရှိရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်,
တဦးမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်
မူပိုင်ခွင့်© 2016 Dongguan Hengsu အစိမ်းရောင်အဆောက်အဦးပစ္စည်း Co. , Ltd. , |မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး | Worldsou အားဖြင့် Powered